INDAWO EKHETHEKILE NOKUTHULA YOMNDENI KANYE ABANGANE
ILa Croisee Des Vents iyikhaya lomndeni “Landaise” elimiswe kahle elibekwe endaweni eyihektare lenkundla, lizungezwe ihlathi le-oki elizimele futhi lijabulela ama-panorama anokuthula emaphandleni avikelekile aseFrance. Nechibi layo elingasese.
Indawo yokuhlala ye-lounge inesakhiwo esilungele umbhangqwana, umndeni noma iqembu elikhulu. Igumbi lokulala eliphindwe kabili namagumbi amabili okulala kanye negumbi lokugezela lomndeni elikhulu eliphansi eline-wc kanye ne-wc ehlukile. Izitezi eziphezulu ze-en-suite yokugezela kanye negumbi lokulala elikhulu. Kufakwe amathawula nezingubo zokulala.
Ukuhambisana nemvelo ezungezile abanikazi bakhe 'ikhaya elisuka ekhaya' becabanga kokubili ngaphakathi kanye ne-allfresco. Igumbi lokuphumula elibanzi negumbi lokuhlala elisondelene, ikhishi elihlome ngokuphelele elinehhavini ye-rotisserie / uhhavini we-pizza kanye negumbi elihlukile lezinsizakusebenza elinewasha izitsha, ukuwasha nokomisa kanye nesiqandisi esikhulu sesitayela saseMelika.
Ikhishi nalo ligcwele zonke izinto zokupheka, okokusika, namasethi okudla kwakusihlwa.
I-Au-Berge yasendaweni ekhonza ngokuhlonishwayo okunye kokudla okuphambili kwe-Gascony e-France! Ungathenga amaqanda amahhala, idada, inkukhu, nehansi emapulazini aseduze. I-pizzeria yasendaweni, kanye nezindawo zokubhaka ezi-2 eziseduze nezitolo ezisebangeni lokuhamba noma ukushayela okufushane. Singeluleka ngezindawo zokudlela zasendaweni.
Le ndawo inakekelwa umsingathi wethu onobungane u-Sheryl, ohlala eduze futhi onganikeza noma yiluphi usizo lwendawo. Singakunikeza imininingwane yokuxhumana naye ukuze senze amalungiselelo adingekayo. Sizoxhumana nawe mayelana, izikhombisi-ndlela, okhiye kanye nokufinyelela eduze nokufika kwakho.
Le ndawo inakekelwa umsingathi wethu onobungane u-Sheryl, ohlala eduze futhi onganikeza noma yiluphi usizo lwendawo. Singakunikeza imininingwane yokuxhumana naye ukuze senze amalun…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$341.